မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အမြဲခင်မင်နေစေတဲ့အချက်တစ်ခုဆိုရင် ...?
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ဘာကိုဖြေချင်မလဲ မသိပေမယ့် ကျွန်တော့် အယူအဆလေးတစ်ခုကို ပြောချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ရိုးသားပွင့်လင်းဖို့ပဲလို့ ဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်။
ရိုးသားခြင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ လူတွေက "ရိုးဂုဏ်ကို ထိန်းကွာ" "ရိုးသားခြင်းကသာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိနိုင်တယ်" "ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စားပါကွာ"စတဲ့စကားလုံးကို ကြားဖူးနေပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးသားခြင်းက ဘာတွေအတွက် လိုအပ်သလဲ။
ဒီနေရမှာ ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ လူတိုင်းက ရိုးသားကြပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ကလဲလို့ မေးရင် ငယ်စဉ်ကတည်းကပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကပေးတဲ့ ဆူးကလေးတွေကြောင့် ရိုးသားခြင်းအစား လိမ်ညာခြင်း ဖုံးကွယ်ခြင်း စတာတွေကို တစ်ခါတစ်ရံကျင့်သုံးမိရင်းကနေ အစွဲတစ်ခု အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်သွားတတ်ကြတာလေးကို ကျွန်တော်သွားတွေ့မိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လူငယ်တွေက ရိုးသားတဲ့လူငယ် မရိုးသားတဲ့ လူငယ်ဆိုပြီး ကွဲလာကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှတော့ ရိုးသားခြင်းရဲ့ စွမ်းအားတွေကို သိရှိလာသူတွေများလာတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရိုးသားသား ဖြေကြတာကို လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့လာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်း ရိုးသားခြင်းက ရှိနေရမှာပါပဲ။ မရိုးသားခဲ့ရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ထက် ကိုယ့်ကို အရင် အဓိက ထိခိုက်ပါတယ်။ ဉပမာအနေနဲ့ပြောပြရရင် သင်ကြားတဲ့အခါ ... ကိုယ်က ဘာသာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာတယ်ဆိုပါစို့။ ကိုယ်မသိတာကို မသိဘူးလို့ ဖြေလိုက်တာက ရိုးသားခြင်းဖြစ်သလို သင်ပေးတဲ့ဆရာအတွက်လည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။ မဟုတ်ဘဲ မရိုးမသားနဲ့ သိသလိုလို မသိသလိုလို လုပ်နေရတာက ကိုယ်လေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကို စတင်လိမ်ညာသလိုဖြစ်ပြီး အရာမရောက်သလို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လို ခရီးမရောက်တာကနေဘဲ ဆက်တိုက် ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရတတ်တယ်။ သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတွေက "မင်းတို့ကိုယ်တိုင် မင်းတို့ မညာဖို့လိုတယ်"လို့ အမြဲပြောကြပါတယ်။
မိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလဲ ... အဲ့ကောင် ရိုးသားချက်ကကွာတို့ ... သူက ရိုးသားတယ် ဆိုတာပဲတို့ ကြားလိုက်ရင် ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးကြည့်လိုက်ပါ။ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ... အပြောခံရတဲ့သူအနေနဲ့ ကြည်နူးတယ်။ ဂုဏ်ယူမိတာလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်မိကြလိမ့်မှာအမှန်ပါ။ ပြောလိုက်တဲ့သူကကော ... သူ့အတွက် စိတ်ချလက်ချနဲ့ လက်လွှဲလို့ရတာမျိုးအထိ တွေးမိသွားတာမျိုးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။
ရိုးသားစွာ ခင်မင်ခြင်း ပေါင်းသင်းခြင်းကနေ ... ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ယုံကြည်ခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ စိတ်ချခြင်း စတဲ့ Personal Branding ပိုင်းတွေရဲ့ အားသာချက်တော်တော်များများကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ရိုးသားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော် အမြတ်တနိုး ရှိလှတဲ့ Quote လေးတွေကတော့ ...
🗒 "Honesty is the first chapter in the book of wisdom." -Thomas Jefferson
🗒 "Honesty is the best policy. If I lose mine honor, I lose myself." -William Shakespeare
🗒 “No legacy is so rich as honesty.” - -William Shakespeare, All's Well That Ends Well
🗒 “Honest people don't hide their deeds.” ― Emily Brontë, Wuthering Heights
🗒 “A half truth isawhole lie.” ~ Yiddish Proverb
🗒 “It takes strength and courage to admit the truth.” ― Rick Riordan, The Red Pyramid
ရိုးသားပွင့်လင်းတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်လေးကို အဆက်မပြတ် ထိန်းသိမ်းကာ ... မိမိလျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ခရီးလမ်းမှာ ဒီထက်မက အောင်မြင်ကြပါစေလို့ ပြောကြားရင်း ရိုးသားခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ သိမ်းထားတဲ့ စကားစုလေးတွေများရှိရင်လည်း ပြောကြားပေးခဲ့ပါဦး။
မအိကြာဖြူ (ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
"YSE" ၏ အမိုက်စား အစီအစဉ်လေး မကြာခင်လာမည်